Navadiky ny Fandaharan’ny Fahitalavitra Japoney Ho Fialamboly Ny Fandraofana sy Fandroahana Mpifindramonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2018 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Ελληνικά, Italiano, Español, 繁體中文, English
Maribolana: (Ery ambony) “Fandrakofana manontolo: G-Men avy amin'ny Birao mikasika ny Fifindràmonina: Mitily vahiny vietnamiana iray tsy ara-dalàna mandritra ny iray volana” “(eo ambany)” “OLONA LANY FAHAZOANA MITOETRA” “FANDROAHANA AN-TERY”
Pikantsary avy amin'ny fandaharana fahitalavitra “Tamin'ny fotoana indrindra izay nandroahana azy ireo” (タイキョの瞬間) eo amin'ny YouTube.
Raha toa maminavina ny fitomboan'isan'ireo mpifindramonina sy ireo vahiny mpizahatany ato anatin'ireo taona maro ho avy i Japana, navadiky ny fandaharana iray vaovao ao amin'ny fahitalavitra ho fialamboly kosa ireo fandroahana mpifindramonina. Niteraka fanehoankevitra an-katezerana avy tamin'ireo mpijery fahitalavitra sy momba ny olan'ireo olona lany fahazoandàlana mipetraka sy ireo mpifindramonina tsy manana taratasy ao Japana.
Taikyo no Shunkan (タイキョの瞬間) (dikanteny Anglisy: “Tamin'ny fotoana indrindra izay nandroahana azy ireo”) dia napoitra voalohany teo amin'ny Fahitalavitra Fuji tao anatin'ny fotoana be mpijery indrindra ny Sabotsy hariva tamin'ny 6 Oktobra 2018.
Ity fandaharana adiny roa ity dia mampiasa endrika mitovy karazana aminà fandaharana fahitalavitra miresaka zava-misy ary manaraka ny vondrona izay voalaza fa “G-Men”, na ireo manampahefana mpiasan'ny fifindràmonina, ampiasain'ny biraom-paritry ny Birao nasionaly misahana ny Fifindràmonina ao Tokyo amin'ny fanenjehany an'ireo mipetraka ao nefa efa lany fahazoandalana sy “ireo vahiny lazaina hoe tsy ara-dalàna” (fuhotaizaisha, 不法滞在者) ary mpidongizina aminà fananàn'lona (fuhosenshu, 不法占有).
Ao anaty ampahany iray, nitsatoka teo ivelan'ny trano fonenan'ny lehilahy vietnamiana iray nahiahiana ho nandika ireo fepetra fahazoandàlanay maha-mpianatra asa azy ireo mpiasan'ny fifindràmonina. Nosamborina izy sy ireo olona roa hafa ary nohadihadiana nanoloana ny fakantsary nialohan'ny nandroahana azy 24 ora taty aoriana.
Ao anatin'ny ampahany iray hafa, nanao bemidina tao aminà ozinina iray ireo mpiasan'ny fifindràmonina ary nitazona vondrona Indiana noahiahiana ho mpiasa tsy manana taratasy – tsy nalaina sary velively ireo tompon'ilay ozinina.
Ampahany iray farany manadihady ny olan'ireo shinoa mpidongizina izay namrona toerana fambolena teo aminà tanim-bahoaka, eo amin'ny ampahan-tany iray mitokana ao amin'ny moron'ny renirano any Kyoto.
Hatreto, tamin'ny DailyMotion no afaka nahitàna manontolo ilay fandaharana nakarin'ireo mpankasitraka (efa tapaka ny rohy).
Nahazo tsikera marobe ny vontoatiny sy nyfomba filazan'i Taikyo no Shunkan. Nilaza ny vondrona japoney iray mpanohitra ny fanavakavahana Counter-Racist Action Collective (C.R.A.C.) fa ny Birao an'ny fifindràmonina ao Japana, izay mampiasa ireo “G-Men” naseho, no tena nampahafantatra / nanao dokambarotra ho an'ilay fandaharana.
Tohanan'ny Biraon'ny fifindràmonina ao Tokyo,amin'ny fomba ofisialy, ity fandaharana ity, izay ahitana ny vitsy indrindra erantany raha resaka fankatoavana mpialokaloka sy fanararaotana isanandro an'ireo mpifindramonina sy ireo mpitsoaponenana, matetika miafara hatramin'ny fahafatesana izany. https://t.co/HLuMOZf72e
[Fandikàna ny bitsika an'ny Biraon'ny fifindràmonina ao Tokyo]
Fanambaràna iray avy amin'ny Biraom-paritry ny Fifindràmonina ao Tokyo:
Namoaka sombiny iray tamin'ny fandaharana Tokyo Keizai Shimbun tamin'ny sabotsy hariva [izay nampideradera ny biraon'ny fifindràmonina] ny Tokyo Keizai Shimbun. Azafady indrindra mba tsy ho adino ny mamaky an'ity mialohan'ny hijerenao ny fandaharana!!! Vakio ato ny tantaran'i Tokyo Keizai (bitsika amin'ny teny japoney). https://t.co/3fDFDaQKhV
Teo am-pieritreretana ny hanamafy an'ireo asany mikasika ny fifidràmonina i Japana no nivoaka ilay fandaharana tamin'ny fahitalavitra – mikatsaka ny hampiditra mpiasa vahiny fara-fahakeliny miisa 500 000 ny governemanta mba hanampy amin'ny fiatrehana ny tsy fahampiana mpiasa (tsy dia mandray anjara betsaka foana eo amin'ny tsenan'asa ireo vehivavy japoney, izay mitarika ny tsy fahampiana mpiasa).
Maro amin'ireo mpiasa miisa 500 000 ireo no heverina hisahana ny asa vonjimaika andraisan-karama amin'ny karama ambany sy asa mafy, izay nanosika azy ireo hatrany hitady asa tsara karama kokoa nefa tsy voarakitra an-taratasy raha vantany vao tonga izy ireo.
Lahatsoratra Japoney Buzzfeed iray an'i Kota Hatachi momba ny Taikyo No Shunkan no namondrona ety anaty aterineto ireo fanehoankevitra mikasika ny fandaharana sy fahitàna ny fiainan'ireo mpiasa vahiny ao Japana. Ny iray amin'izy ireo manamarika fa raha toa ireo mpiasa tsy manana taratasy aseho ho toy ny loza mitatao ho an'i Japana, ny tena zava-misy dia ireo mpiasa ireo ihany, izay henjehiana, adihadiana ary roahana avy eo, no miatrika mazava tsara ny tena loza goavana.
Tsipihan'i Hatachi fa fara-faharatsiny olona 13 no maty noho ny famonjàna mpifindramonina tao Japana hatramin'ny taona 2009, antontan'isa iray izay tsy nampahafantarin'ny fandaharan'ny Taikyo No Shunkan velively.
Mogi Kenichiro, olona malazan'ny media no sady manampahaizana momba ny atidoha, no nitsikera ihany koa ny maha-matsatso an'ilay fandaharana amin'ny fahitalavitra, izay manao an'ireo fanafihana mahery vaika tampoka natao tamin'ireo mpifindràmonina, ho toy ny fialamboly.
Tsy misy fijerena lalina, tsy misy akory fanadihadiana na dia bitika aza ary miaraka amin'ny sarintsarinà fialamboly tandrametaka, ny Taikyo no Shunkan an'ny Fahitalavitra Fuji no fandaharana amin'ny fahitalavitra ratsy indrindra ao Japana ankehitriny. Zavatra mahasanganehana manerantany izany.
Taorian'ny nandefasana ny fandaharana, nihetsika ireo japoney mpikatroka mba hahafahan'ireo mpiasa tsy manana taratasy voasambotra sy nogadraina ao amin'ny ivon-toerana iray famonjana ary fantatry ny maro hafa fa tsy irery izy ireo no toy izany
Nalefanay tamin'ny imailaka ho any amin'ireo olona izay alefa sesitany any Ushiku (Higashi Nihon Immigration Center) ireto sarin'olona manohitra ny Taikyo No Shukan an'ny fahitalavitra Fuji tao Shibuya ( Tokyo) ireto. Hijery azy ireo izahay amin'ity herinandro ity. #FreeUshiku #TelevisedHouseHoldSearches
Tsy voafetra ho ao Japana irery ihany ireo ahitàna fandaharana amin'ny fahitalavitra izay manodinkodina ireo lalàna momba ny fifindràmonina ho amin'ny resaka fialamboly, ary mahazo ny fanohanana sy ny fanampian'ireo masoivoho governemantaly, miandraikitra ny fiarovana sisintany.
Efa hatramin'ny ela ireo media ao Royaume-Uni sy ao Aostralia no nandefa fandaharana ahitana fanafihana tampoka, fanadihadiana, famonjaina ary matetika aza fandroahana an'ireo mpivezivezy sy ireo mpifindramonina tsy manana taratasy manoloana ny fakantsary.
Fandaharana Kanadiana iray mitovy aminy, novokarina niaraka tamin'ny fiaraha-miasa mivantana tamin'ny Canada Border Services Agency (CBSA), no nofoanana tamin'ny taona 2016 noho ireo fanitsakitsahana ny fiainana manokan'ny olona. Alefa foana amin'ny alalan'ireo famerenana anfa ilay fandaharana.